Uncategorized – Nepal Trending
नेपाल ट्रेण्डिङ	 २३ आश्विन २०७६, बिहीबार १५:४७ 0
नेपाल ट्रेण्डिङ	 ९ भाद्र २०७६, सोमबार १५:०६ 0
कतारबिरुद्ध चौका छक्काको बर्षा गर्दै नेपाली ओपनर (हेर्नुस लाईभ भिडियो…
अन्तराष्ट्रिय अर्थ खेलकुद प्रवास खबर भिडीयो मनोरन्जन राजनीति
अष्ट्रेलियाले न्युजिल्याण्डसामु प्रस्तुत गर्‍यो २४४ रनको लक्ष्य ! यो जित कस्को ?
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १४ असार २०७६, शनिबार २२:२१ 0
एजेन्सी : इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जारी १२ औँ आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत अहिले भइरहेको खेलमा अष्ट्रेलियाले न्यूजिल्याण्डलाई २ सय ४४ रनको लक्ष्य दिएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अष्ट्रेलियाले निर्धारित ५० ओभरमा नाै…
चेन्नईले दिल्लीलाई दियो १ सय ८० रनको लक्ष्य, उक्त लक्ष्यलाई दिल्लीले भेटाउछ त ?
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १८ बैशाख २०७६, बुधबार २२:११ 0
काठमाडौँ । आइपिएल अन्तर्गत चेन्नई सुपरकिंग्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई १८० रनको लक्ष्य दिएको छ । टस हारेर पहिला ब्याटिंग गरेको चेन्नईले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाउदै १७९ रन बनाएको हो । चेन्नईका लागि सुरेश रैनाले सर्वाधिक ५९ रन बनाएका थिए ।…
खुशीको खबर ! आज कोलकाता बिरुद्ध सन्दिप लामिछानेले खेल्ने पक्का
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १६ चैत्र २०७५, शनिबार १४:२२ 0
काठमाडौँ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) क्रिकेट अन्तर्गत आज दिल्ली क्यापिटल्सले कोलकोता नाइटराइडर्सको सामना गर्दै छ । दिल्लीको घरेलु मैदान कोटलामा हुने यो खेल नेपाली समय अनुसार राति सवा ८ बजे सुरु हुने छ । यसअघिका दुवै खेल जितेको कोलकोता र…
आइपीएलः घुमन्ते सन्दीपको पालो कहिले?
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार १२:२७ 0
काठमाडौं । क्रिकेटलाई पछ्याउने देशमा मिडियाले नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई दिएको नयाँ नाम हो– घुमन्ते । किन भन्दा उनले पछिल्लो वर्ष अनेकौं देशमा गएर त्यहाँका घरेलु लिग खेलेका छन् । गएको सिजनमा इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) मा आवद्ध…
‘ दिल्लीलाई आईपिएल जित्नु छ भन्ने सन्दिपलाई खेलाउनै पर्ने ‘
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १३ चैत्र २०७५, बुधबार १८:५० 0
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिगमा मंगलबार राति दिल्ली क्यापिटल्सले चेन्नाई सुपर किंग्ससँग पराजय भोग्यो । दिल्लीको पराजयका विभिन्न कारणमध्ये नेपाली लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानलेलाई टिममा समावेश नगराउनु पनि हो त ? क्रिकेट विश्लेषक…
पैसा नदिएको भन्दै अदालतमा महेन्द्र सिंह धोनीले हाले मुद्दा
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १३ चैत्र २०७५, बुधबार १४:०५ 0
एजेन्सी । भारतका चर्चित क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनीले आम्रपाली समुहसँग आफ्नो पैसा उठाउन भारतको सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गरेका छन् । रियल स्टेट क्षेत्रमा कहलिएको आम्रपाली समुहसँग धोनीले सन् २००९ मा ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा आबद्ध भएबापत…
म मर्दैछु भनेर स्टाट्स लेखेका युवकको शव बाँस घारीमा कारण एस्तो रहेछ हेर्नुहोस
नेपाल ट्रेण्डिङ	 ६ चैत्र २०७५, बुधबार १२:१२ 0
झापा । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो मृत्यू बारे स्टाटस् लेख्ने झापा बिर्तामोड–९ का युशन श्रेष्ठ सोमबार घर नजिकै मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यलय अनारमनीले जनाए अनुसार सोमबार विहान गाउँलेले युशन मृत अव स्थामा भेटेपछि परिवारलाई…
बिग ब्यास फाइनलमा सन्दिपको शानदार बलिङ , ४ ओभरमा कति रन दिए ? कति विकेट लिए त ? हेर्नुस
नेपाल ट्रेण्डिङ	 ५ फाल्गुन २०७५, आईतवार १०:५३ 0
काठमाडौं । बिग बास लिगको फाइनलमा अहिले मेलवर्नका दुई क्लब मेलवर्न स्टार्स र मेलवर्न रेनेगडेस आज उपाधिका लागि खेलिरहेका छन् । खेलमा टस जितेर पहिले बलिङ गरेको मेलवर्न स्टार्सको लागि अाज पनि सन्दिपले शानदार बलिङ गरेका छन् । उनले ४ अोभरमा…
पशुपतिको गित ‘लुट्न सके लुट्’ कान्छा युट्युबबाट हट्यो ! कारण यस्तो
नेपाल ट्रेण्डिङ	 ४ फाल्गुन २०७५, शनिबार २२:२२ 0
काठमाडौं : गायक पशुपति शर्माको नयाँ गीत‘लुट्न सके लुट् कान्छा..’ सार्वजनिक भएको दोस्रो दिन युट्युब च्यानलबाट हटेको छ । शर्माको युट्युब च्यानलमा शुक्रबार सार्वजनिक भएको गीत शनिबार नेपालको युट्युब ट्रेन्डिङमा १० औं नम्बरमा परेको थियो ।…